Pleiades boka renyeredzi: hunhu, kucherechedza uye ngano | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 03/05/2021 09:46 | Kuongorora nyeredzi
Nhasi tinotarisa kune nyika yeastronomy kurondedzera inozivikanwa boka renyeredzi iro rakatsaurirwa kupasi redu. Ndezve iyo pleiades. Iri izumbu rakavhurika renyeredzi padyo nepasi uye rinozivikanwa seVanomwe veCosmic Sista, uye murume wepamberi wechiSpanish anozivikanwa neanomwe machena macaps. Izvo zviri nyore nyore kuziva masango akavhurika mudenga rehusiku sezvo iri padhuze nepasi. Inogona kuonekwa kuchamhembe hemisphere mune boka renyeredzi reTaurus chinhambwe chingangoita mazana mana emakore echiedza.
Muchinyorwa chino tichaenda kukuudza zvese hunhu, mavambo uye ngano dzePleiades.
2 Ngano dzePleiades
3 Kucherechedza kwePleiades
4 Zvidzidzo zvekucherechedza
Iyo idiki nyeredzi masumbu sezvo nyeredzi dzichingori chete angangoita mamirioni makumi maviri emakore. Mune yakavhurika masumbu tinogona kuwana dzakatenderedza 20-500 nyeredzi ine inopisa inotaridzika mhando B maitiro ayo ese ari mune renyeredzi reTaurus. Tiri kuzotsanangura mhando huru dzenyeredzi dzatinogona kuwana muyejuni uye kupenya kwadzo:
Alcyone: Ndiyo nyeredzi inopenya pane vese avo vari vePleiades uye iri chinhambwe chingangoita mazana mana nemakumi mana emakore echiedza kubva kupasi redu. Ukuru hwayo hwakajeka i440 uye iri nyeredzi inopenya zvakapetwa ka2.85 kupfuura zuva, iri rakakura zvakapetwa kagumi.
Atlas: ndiyo nyeredzi yechipiri inopenya kwazvo musumbu rePleiades uye iri chinhambwe chemakore echiedza mazana mana nemakumi mana, saAlcyone. Iyo ine hukuru hwakajeka hwe +440.
Electra: Ndiyo nyeredzi yechitatu kana tikairaira nekupenya mwero uye zvakare iri panzvimbo imwechete uye kubva kune mamwe maviri. Ukuru hwayo hwakajeka ndi + 3.72.
Maia: ndeimwe yenyeredzi ine bhuruu-chena ruvara uye iri chinhambwe chingangoita mazana mana nemakumi mana emakore emwenje ine hukuru hwakajeka hwe + 440.
Merope: Mukurongeka kwekupenya iyo yechishanu uye iri nyeredzi nyeredzi ine bhuruu-chena ruvara ine ukuru hwakajeka hwe +4.14 nyika inowanikwa zvakanyanya kana zvishoma padaro rakaenzana pakati pevamwe.
Taygeta: iyo nyeredzi bhanari ine hukuru hwakajeka hwe + 4.29 uye iri padyo padyo nesolar system, iri chinhambwe chemakore wechiedza makumi mana nemaviri.
Pleione: iyo nyeredzi iri pachinhambwe chakafanana kune yakasara uye iri inopenya kakapetwa ka190 kupfuura zuva. Iyo ine nharaunda 3.2 yakapetwa kakakura uye kutenderera kwayo kumhanya kwakapetwa kane zana kupfuura zuva.
Celaeno: Iyo subgiant binary nyeredzi ine bhuruu-chena ruvara. Ukuru hwayo hwakajeka +5.45 uye iri chinhambwe chemakore echiedza mazana mana nemakumi mana.
Sezvaunogona kutarisira, mazhinji emapoka enyeredzi mudenga ane yavo ngano. Kune ngano dzakasiyana pamusoro pePleiades dzinotaura nezve kuvapo kwavo munzvimbo yekudenga. Imwe yenyaya dzengano idzi ndipo panonzi maPleiade njiva uye hanzvadzi nomwe dzinonzi ndidzo pfungwa dzegungwa rePleione neAtlas. Masisita aive Maya, Electra, Taigete, Asterope, Merope, Alcíone naCelaeno, ivo vakashandurwa kuita nyeredzi naiye Mwari Zeus, senzira yekuvadzivirira kubva kuOrion uyo aivateveraZvinotonzi kusvika nanhasi Orion anodzingirira masista mudenga rehusiku.
Ngano zvakare ine iyo yekuti vanamwari vakasiyana veOlympian vakaita saZeus, Poseidon naAres vakanyengerwa nekukwezva kwehanzvadzi idzi ndokusiya michero muhukama. Maya, aive nemwanakomana naZeus, uye vakamupa zita rekuti Hermes, Celeno aive naLico, Nicteo naEufemo naPoseidon, Alcíone akapawo mwanakomana kuna Poseidon, wavakatumidza kuti Hirieo, Electra aive naZeus vanakomana vaviri vaakatumidza kuti Dárdano uye Yasión, Sterope akabereka Oenomaus naAres, Táigete aive naLacedemon naZeus; ari iye chete Merope iye ega wevanin'ina vePleiadian vasina kuchengetedza hukama neVamwariMukupesana, aingove nehukama neanofa, Sisyphus.
Chimwe chikamu chengano chinotaurira kuti hanzvadzi dzePleiadian dzakasarudza kutora hupenyu hwavo sezvo ivo vainzwa vakashushikana zvakanyanya nezvose zvakaitika nababa vavo Atlas uye kurasikirwa kwevavo Sista maHyades. Paaizozviuraya, Zeus akafunga kuvapa kusafa uye Akaaisa mudenga kuti akwanise kuaita nyeredzi. Nekudaro ngano dzeiyi boka renyeredzi mudenga dzinozvarwa.
Sezvatakambotaura, iyo Pleiades iri padyo nepasi redu, saka zviri nyore kwazvo kuona mudenga. Iyo inofungidzirwa sumbu renyeredzi ine nzvimbo iri nyore. Nyeredzi dzayo huru dzinopenya uye dzinogona kuoneka nyore. Iwe unofanirwa kufunga nezve chirevo chekutsvaga iyo nyeredzi sumbu uye ndeye kushandisa renyeredzi gwara reTaurus kuitira kuti ma pleiade ave nyore kuziva, sezvo iri mukati.
Kazhinji nyeredzi nhanhatu chete dzinogona kuzivikanwa neziso rakashama, asi kana husiku hwakajeka, zvimwe zvinogona kuzivikanwa. Kuti uwane iyo Pleiades zvakanaka, unogona kushandisa Orion seimwe gwara. Iyo ndeimwe yemapoka akakurumbira kwazvo uye inoshanda senzira yekutungamira kuti usvike kune ino nyeredzi. Ivo ari pamusoro peOrion, kuyambuka boka renyeredzi reTaurus uye iboka renyeredzi bhuruu.
Chikamu chakanakisa chenyeredzi chinozivikanwa senzvimbo yepamusoro iwe uri mumwedzi waMbudzi. Ndipo painogona kunyatsooneka zvakanaka kwazvo. Kana ichionekwa kuburikidza nehunyanzvi teresikopu zvinogona kusiyaniswa zvakajeka kuti dzakakomberedzwa nechinhu chine ruvara rwebhuruu mune iyo nyeredzi nyeredzi inoratidzwa uye yakakomberedzwa nebula.
Iyi sumbu renyeredzi rinonyanya kunakidza pakudzidza nyeredzi dzazvino, ndosaka nhasi vachiri chikamu chekuferefeta nyeredzi chinotenderera tarisiro yeupenyu uye ramangwana reyeredzi dzakanaka idzi.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve izvo zvinonzi maPleiades uye kuti ndeapi maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Kuongorora nyeredzi » Pleiades